Kintana WWE 5 amin'izao fotoana izao izay mety ho ao amin'ny Hall of Fame amin'ny 5 taona ho avy - Wwe
Kintana WWE 5 amin'izao fotoana izao izay mety ho ao amin'ny Hall of Fame amin'ny 5 taona ho avy
WWE dia nampiditra ny lehibe amin'ny orinasan'ny tolona pro ho ao amin'ny Hall of Fame WWE hatramin'ny nanombohany, niaiky ny fandraisan'anjaran'ireo mpilalao, mpitantana, mpaneho hevitra ary koa ireo miasa ao ambadiky ny seho.
WWE dia tsy nampiditra ireo izay anisan'ny orinasa fotsiny, fa koa ireo izay niasa tamin'ny orinasa hafa sy ny fampiroboroboana mpifaninana. Ny edisionan'ny Hall of Fame edisiôna 2020 dia naverina namboarina indray noho ny areti-mifindra COVID-19, ka nahatonga ny Kilasy 2020 sy 2021 nampidirina tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Soa ihany fa tena hiverina ny mpankafy hijerena ny lanonana Hall of Fame amin'ny taona manaraka. Amin'ity lahatsoratra ity dia jerentsika ireo kintana WWE miisa dimy izay azo ampidirina ao amin'ny Hall of Fame an'ny orinasa ao anatin'ny dimy taona manaraka.
Ny lahatsoratra dia tsy misy afa-tsy ireo izay nifanarahana tamin'i WWE ankehitriny, izay midika hoe Hall of Famers amin'ny balota voalohany toa ny The Rock, Brock Lesnar, ary Daniel Bryan dia tsy tafiditra ao anatin'ity lisitra ity.
# 5 Paul Heyman haiditra ao amin'ny Hall of Fame WWE
Paul Heyman dia nandray anjara betsaka tamin'ny tolona pro, tsy toy ny mpitantana an-tserasera ihany, fa amin'ny maha-lehilahy ao ambadiky ny ECW. Ny fampiroboroboana dia nanolotra mpankafy karazanà tolona pro henjana sy lozabe kokoa ary safidy hafa amin'ny WWE sy WCW.
Heyman dia niditra an-tsehatra tamin'ny tolona pro hatramin'ny taona 80, mpaka sary aloha ary avy eo nifindra ho lasa olo-malaza eo amin'ny efijery toa an'i Paul E. Mampidi-doza.
' @WWERomanRoyals Tsy tompon'ny titre fa Tompondaka. Tsy Tompondaka ihany, NY Tompondaka. ' - @HeymanHustle #Smack down pic.twitter.com/ArPwV0ADkm
- WWE amin'ny FOX (@WWEonFOX) 22 Mey 2021
Heyman dia raisina ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny mikrô ary toy ny olona iray izay afaka manome halalin-javatra lalina amin'ny tantaram-pitolomana ho an'ny tolona. Ny filohan'ny WWE Vince McMahon dia nanana fifandraisana efa ela tamin'i Heyman, ary nandoa azy aza mba hitazomana ny ECW velona rehefa sahirana ara-bola.
Androany 24 taona lasa izay, Paul Heyman sy Tommy Dreamer dia nanatrika ny WWF Raw tao amin'ny Hartford Civic Center any Hartford, Connecticut.
Nipetraka teo am-piandohana izy ireo, niandry ny ekipa robina ECW Rob Van Dam vao nilatsaka tao amin'ny Flash Funk ny alina ... pic.twitter.com/SosDFbaJrl
- The Extreme Gamer (@_Extreme_Gamer) 9 Jona 2021
Ankoatry ny maha olona ambony azy azy, Heyman koa dia mpitsikera sy anisan'ny ekipa mpanoratra WWE taloha. Azo inoana fa hidina amin'ny tantara izy amin'ny maha-mpilalao fototra azy amin'ny taona 1990.
Paul Heyman dia tsy maintsy ekena noho ireo antony rehetra ireo ao amin'ny Hall of Fame WWE, ary mety hatao mandritra ny taona vitsivitsy ny fampidirana azy.
mandra-pahoviana ny lehilahy ho raiki-pitia
mahita fahasambarana amin'ny fanambadiana ratsy
fa maninona cm punk no niala wwe
vanim-potoana famoahana amerikanina 3 rehetra
andre ilay goavambe vs ilay seho lehibe